Myanmar Health Updates Journal | သတင်း
- - Navigate to... - - HomeCategories
- - ဆောင်းပါး - - သတင်း - - မှတ်သားဖွယ် - - မျက်နှာဖုံးများ
Select Category ဆောင်းပါး သတင်း မှတ်သားဖွယ် Journal Releases မျက်နှာဖုံးများ
- - Navigate to... - - Homeဆောင်းပါးသတင်းမှတ်သားဖွယ်မျက်နှာဖုံးများ
3D ပရင်တာဖြင့် ပြုလုပ်တဲ့ လေပြွန်တွေကကလေးသုံးဦးရဲ့ အသက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့
အဆီများသော အစားအစာဖြစ်သည့် မြေပဲ. . . နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါသလား၊
အသက်အရွယ်ကြီးလာလေ ဦးနှောက်စွမ်းရည် ပိုပိုမြင့်လာလေ
Health Updates Journal, Issue 138 Cover
မှတ်သားဖွယ်: မုန့်ချိုအိတ်ထဲမှာ အင်ဆူလင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ့ရှိ
မှတ်သားဖွယ်: နေရောင်ခြည်ကရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူး
မျက်နှာဖုံးများ: Health Updates Journal No. 211, Cover
မှတ်သားဖွယ်: လူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်(စ်)တွေက အပြင်မှာ ဘယ်လောက်အထိနေနိုင်သလဲ၊
မှတ်သားဖွယ်: နေ့အချိန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်မြင့်တက်ခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှုရှိနေ
မှတ်သားဖွယ်: ၀န်ထမ်းများ လေ့ကျင့်ခန်းပိုမိုလုပ်စေရန် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ရမည်နည်း
မျက်နှာဖုံးများ: Health Updates Journal No. 210, Cover
မှတ်သားဖွယ်: ဘာလို့တစ်ချို့တွေကကိုယ်ထက်အများကြီးပိုစားပေမယ့် ကိုယ့်လို မ၀လာတာလဲ၊
ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်က အသည်း ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြု
ကော်ဖီ (သို့မဟုတ်) လက်ဖက် ရည်(tea)ကို တစ်နေ့လေးခွက် သောက် သုံးပေးခြင်းဟာ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း ကို ...
X box 360 ဂိမ်းစက်က လေဖြတ်သူများ ကုရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေ
Health Updates Journal No. 101 တရုတ်မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရ လေဖြတ်ထားသော ဝေဒနာရှင်များတွင် Kinect ...
Health Updates Journal No. 86 (၁)အသည်းကို ၀န်ပိစေသောအစားအစာများ၊ အစာချေဖျက်မှုကို ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ လက်ဖက်စိမ်း သောက်သုံးရန် မသင့်
Health Updates Journal No. 90 ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အချိန်၌ လက်ဖက်စိမ်းသောက်ခြင်းသည် ...
အာရှအမျိုးသားများနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု
Health Updates Journal Vol.2, No.38 ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အာရှတိုက်နေ အမျိုးသားများကို ...
Health Updates Journal No. 106 နှစ်စဉ် HIV ဝေဒနာရှင်များအား အဓိကသေဆုံးစေသော တရားခံမှာ Cryptococcosis ဟုခေါ်သည့် မှိုရောဂါဖြစ်ပြီး ယင်းမှိုရောဂါအား ရင်သားကင်ဆာကုသရာ၌သုံးသည့် ဆေးကကုသနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ University of Rochester မှ လေ့လာသူများက ...
Health Updates Journal No. 101 တရုတ်မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရ လေဖြတ်ထားသော ဝေဒနာရှင်များတွင် Kinect games များကဲ့သို့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ရသည့် ကွန်ပျူတာဂိမ်းများက ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းလေ့လာမှုအား Sun Yat Sen University ...
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများတွင် ခေါင်းကိုက်ရခြင်း၏အဓိကတရားခံမှာ ပီကေဖြစ်နေ
Health Updates Journal No. 99 လေ့လာမှုများက ပီကေ၀ါးခြင်းမှာ ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများတွင် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေသောအဓိက အကြောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဦးခေါင်းခွံနှင့် မေးရိုးဆက်ပေးထားသည့် အဆစ်(Temporomandibular joint TMJ )အား ...
၀ိတ်ချနေသူတွေ မစားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၅)မျိုး
Health Updates Journal No. 96 ဆောင်းရာသီ ရောက်လာပြီဆိုရင် တခြားရာသီတွေထက် အနည်းငယ်လေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများ ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ အစားအစာကို ချင့်ချိန်စားသုံးရမှာ ဖြစ်သလို ၀ိတ်ချဖို့အတွက် ...
Health Updates Journal No. 96 အမြွှာလေးတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းဟာ ဦးစားပေးပြီး စောင့်ရှောက်ရတဲ့ high risk ကိုယ်ဝန်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အမြွှာဆိုတာဟာ သန္ဓေသားနှစ်ဦးနှင့် အထက် တစ်ပြိုင်နက်တည်းကို သားအိမ်ထဲမှာ လွယ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းကို ...
သံလိုက်က အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများအား ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်
Health Updates Journal No. 94 လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အစား အလွန်အကျွံစားပြီးနောက် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစသည့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာပြဿနာများအား သံလိုက်ကို အသုံးပြု၍ကုသနိုင်ကြောင်း အကြံပြုခဲ့သည်။ University of Toronto မှ လေ့လာသူများက လူ ...
Health Updates Journal No. 94 သွားကိုက်ဝေဒနာ – ရှေးယခင်က အီဂျစ်ပြည်တွင် သွားကိုက်ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတစ်ဦး၏ သွားပေါ်သို့ ကြွက်သေတစ်ကောင်တင်၍ ကုသခဲ့ ကြသည်။ ရောမနိုင်ငံတွင်လည်း သွားကိုက်နေသူတစ်ဦး၏ ပါးစပ်ကို ရေမြင်း၏ လက်ဝဲဖက်သွားနှင့် ...
ကာနေးရှင်းပန်း၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးထူးများ
Health Updates Journal No. 93 (၁) ကာနေးရှင်းပန်း၏ အဆီသည် အကြောအခြင်စနစ်များကို ပျော့ပြောင်းပြီး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အသားများဖော့ခြင်းကို သက်သာစေသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် သဘာဝဟိုမုန်းဓာတ် Balance ကို ညှိပေးသည်။ ရာသီလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်းများကို ...
Health Updates Journal No. 92 ဒူးနာနေသူများ၊ အဆစ်နာသူများ၊ အရိုးပွသူများ၊ လေးဖက်နာသမားတို့အတွက် အရွတ်များ အားကောင်းစေရန် အရွတ်များ ပျော့ပြောင်းစေဖို့ စားသုံးသင့်သည့် အစားအစာများကို ဖော်ပြရလျှင် (၁) အိုမီဂါ (ဒ) ဖက်တီးအက်ဆစ် ယင်းက အရွတ်များကို ...
Health Updates Journal No. 92 (၁) အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုပြင်ပါ ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အမွှေးနံ့၊ ရေမွှေး၊ ဆပ်ပြာစသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပါ။ အလုပ်ထဲမှာ ကော်ဖီအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းရှောင်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ အစာစားချိန်ထက်မကျော်ပါစေနှင့်။ ...
မုန့်ချိုအိတ်ထဲမှာ အင်ဆူလင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ့ရှိ
ရင်ဘတ် အအေးမိခြင်း အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
တစ်ပတ်လျှင် အလုပ်ချိန် နာရီ ၅၀ ထက် ကျော်ပါက ကျန်းမာရေးပြဿနာများ တွေ့ရှိနိုင်
Health Updates Journal No. 211, Cover
catchacold chest colour hurts Journal Download overload pain psycology stomach stress work
လူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်(စ်)တွေက အပြင်မှာ ဘယ်လောက်အထိနေနိုင်သလဲ၊
နေ့အချိန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်မြင့်တက်ခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှုရှိနေ
၀န်ထမ်းများ လေ့ကျင့်ခန်းပိုမိုလုပ်စေရန် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ရမည်နည်း
Health Updates Journal No. 210, Cover
Health Education Journal for Public. First published on 1st Feb 2012. Motto-Evidence Based, Thruthful & Fruitful. Aim to public, medical students and parents, and all health care providers. Weekly published on every Wednesday.
Copyright 2013 by Health Updates Journal. All rights reserved.
Powered by MyanmarDigital.